Wasaaradda Beeraha Somaliland oo walaac xooggan ka muujisay Ayax si baaxad leh ugu baahaya dalka - Somaliland Post
Home News Wasaaradda Beeraha Somaliland oo walaac xooggan ka muujisay Ayax si baaxad leh...
Wasaaradda Beeraha Somaliland oo walaac xooggan ka muujisay Ayax si baaxad leh ugu baahaya dalka
Hargeysa (SLpost)- Wasaaradda Beeraha Somaliland, ayaa mar kale walaac xooggan ka muujisay baaxadda marxaladda uu marayo cayayaanka Ayaxa oo ku sii baahaya deegaannada Xeebta iyo Bananka dalka Somaliland, kaasoo dhawrkii bilood ee u dambeeyey u kala dab-qaadayey gobollada iyo degmooyinka waddanka qaar badan oo ka tirsan.
War-Saxaafadeed maanta ka soo baxay xarunta Wasaaradda Beeraha ee magaalada Hargeysa, ayaa lagu sheegay inaanay Wasaaraddu isticmaali Karin waqtigan Sunta Kiimikada ah ee loogu talo-galay la-dagaallanka Ayaxa heerka uu marayo oo aan la xakamayn Karin awgeed.
Qoraalka War-Saxaafadeedkaasina waxa uu u dhignaa sidan:-
“Wasaaradda Beeraha Somaliland waxay caddaynaysaa iyadoo horana dhowr jeer digniino u soo saartay in Ayaxii ku habsaday Xeebaha Badda Cas ee Somaliland uu haatan khatar ku haya deegan-daaqsimeedka goballada Selel, Awdal, Saaxil iyo Sanaag.
Ayaxaas oo haatan dam ka siiyey Daaq badan gaar ahaan Banka Giriyaad, Lughaya, Cabdi-geeddi, Ceel-darad iyo Banka Goobaare, wuxuu Ayaxaas oo haatan korankor ahi u gudbayaa dalalka Itoobiya iyo Jabuuti.
Waxa jirta in xilligan Xoolo aad u fara badani ay ku sugan yihiin jiidahaasi Ayaxu ku habsaday oo ay adag tahay in la isticmaalo Sunta kiimikada ah ee lagu buufiyo Ayaxa sida MALATHION. Sidaas darteed, Wasaaradda Beeruhu waxay ku talo-bixinaysaa in aan lagu deg-degin in loo isticmaalo Sunta khatarta ku ah Xoolaha, dadka iyo deeganka-ba, balse loo isticmaalo habka makaanikalka ah.
Wasaaraddu waxay ka waddaa jiidahaas dawo aan Xoolaha iyo dadka toona u lahayn dhibaato, hase-yeeshee, Ayaxa ayaa ka baaxad waynaaday arrintaas. Wasaaraddu waxay si deg-deg ah isugu yeedhay Hay’adaha Caalamiga ah ee ay khusayso arrinta Ayaxa sida FOA, DLCO markii Labaad.”